To & From မိုးဟေမာန်ခင် - Celebrities 8DaysaWeek - Journal
To & From မိုးဟေမာန်ခင်
07 January, 2019, 11:06 AM
Q. မမိုးဟေမာန်ခင်ရဲ့ အကြိုက်ဆုံးအစားအစာ...
A . အကြိုက်ဆုံးအစားအစာ က မုန့်ဟင်းခါးနဲ့ ဟော့ပေါ့။
Q. ဘယ်လိုစတိုင်လ်မျိုး ဝတ်ရ တာ သေဘာကျလဲ။
A . မြန်မာဆိုတော့ မြန်မာဝတ် စုံဝတ်ရတာ သဘောကျပေမယ့် ထသွားထလာဆိုရင်တော့ Sport Shirt နဲ့ Jean ဆိုရင် အရမ်းသက် သောင့်သက်သာရှိလို့ သဘောကျပါ တယ်။
Q. သရုပ်ဆောင်ပြန်လုပ်ဖို့ရှိ လား။ မျှော်နေပါတယ်။
A. သရုပ်ဆောင်လုပ်မှာပါ။ အခုက ငှားတဲ့လူမရှိသေးလို့၊ စတာ ပါ။ ကိုယ်အရမ်းချစ်တဲ့ အနုပညာ ကို တစ်သက်လုံးမြတ်နိုးစွာနဲ့ အခွင့် ရှိသလို လုပ်ကိုင်သွားမှာပါ။ အခု တော့ ဘဝအတွက် ကြိုးစားနေရလို့ ချစ်သော မျှော်နေသော ကျေးဇူးရှင် ချစ်ရတဲ့ ပရိသတ်ကြီးရယ် သည်းခံ ပြီး မျှော်နိုင်သမျှ မျှော်ပေးပါဦးနော်။
Q. အစ်မရဲ့ လက်စွဲဆောင် ပုဒ်....
A. အစ်မရဲ့ လက်စွဲဆောင်ပုဒ် Try My Best ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေပါ့မယ်လို့ပါ။ ဘယ်အရာ ကိုပဲ လုပ်ဆောင်လုပ်ဆောင် ကိုယ် လုပ်တာ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေပါ့မယ်။
Q. အချစ်က အစ်မအတွက် ဘယ်လောက်ထိ အရေးပါလဲ။
A အချစ်က အရမ်းအရေးပါ တယ်ဆိုတဲ့စကားက ငယ်ငယ်က ပြောတာပါ။ အခုတော့ အချစ်က ကိုယ့်အတွက် နှစ်သိမ့်မှု၊ ကိုယ့်ရဲ့Stress တွေကို ပျော်ရွှင်မှုပေးတဲ့ အရာလို့ပဲ ထင်မိပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရမ်းအရေးမကြီးပေမယ့် အချစ်ကို တော့ တန်ဖိုးထားထားပါတယ်။